दया हांग राइसंग ‘बिहे पास’ गर्दै प्रकृति श्रेष्ठ ! बिराटनगरमा मुहर्त सम्पन्न • raradiodarpan.com
दया हांग राइसंग ‘बिहे पास’ गर्दै प्रकृति श्रेष्ठ ! बिराटनगरमा मुहर्त सम्पन्न
नायक दयाहाङ राई र नायिका प्रकृती श्रेष्ठको मुख्य भूमिकामा फिल्म ‘बिहे पास’को छायांकन सुरु भएको छ । उक्त फिल्म विराटनगरको एक मन्दिरमा पुजा गर्दै छायांकन सुरु गरिएको हो । नायिका प्रकृति श्रेष्ठ ६ वर्ष पछाडी फिल्ममा कमब्याक गर्दैछिन भने उनले सन् २०१३ मा होस्टेल फिल्ममा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै डेब्यु गरेकी थिइन् । सो बेला उनको चर्चा र अभिनयको खुबै तारिफ भएको थियो । उनले उत्सव, जिन्दगी रक्स, आभाष जस्ता फिल्ममा अभिनय गरेपछि पलायन सरह भईन । विवाह गरेर अमेरिका रहदै आएकी प्रकृतिको ‘बिहे पास’ संगै चर्चा बाक्लिदो छ ।